Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya China Ampoule Filling Production Line IVEN
Line Production Liquid Injectable - Ampoule SVP
Ahịrị mmepụta ampoule gụnyere igwe ịsa ahụ ultrasonic kwụ ọtọ, igwe na -ehicha mmiri RSM na igwe na -ejuputa AGF na igwe akara. E kewara ya na mpaghara ịsa ahụ, mpaghara sterilizing, njuputa na mpaghara akara. Ahịrị kọmpụta a nwere ike ịrụkọ ọrụ ọnụ yana n'adabereghị. Tụnyere ndị nrụpụta ndị ọzọ, akụrụngwa anyị nwere atụmatụ pụrụ iche, gụnyere akụkụ n'ozuzu ya pere mpe, akpaaka na nkwụsi ike dị elu, ọnụego mmejọ dị ala na ọnụ ahịa mmezi, wdg.
Maka mmepụta ampoule iko.
Ọ na -anabata teknụzụ ịsa mmiri nke mmiri 2 na ikuku 2 na mgbidi dị n'elu yana 3 mmiri na ikuku 4 na mgbidi dị n'ime.
Otu 6 nke agịga ịgba mmiri nwere asacha ụzọ, agịga ịgba na -agba nchara 316L zuru oke. Sistemụ njikwa Servo+ aka uwe na bọọdụ ntụzịaka na -enye ọnọdụ agịga ịgba, n'ụzọ ziri ezi zere mmebi agịga nke enweghị nkwekọrịta.
WFI na ikuku abịakọrọ na -akwụsịtụ, belata oriri.
Usoro nsacha ọkọlọtọ ：
2. ultrasonic ịsa
3.Recycled mmiri: n'ime ịsa, ịsa n'èzí
4.Compressed air: n'ime ịfụ
5.Recycled mmiri: n'ime ịsa, n'èzí ịsa
6.Compressed air: n'ime ịfụ
7.WFI: n'ime ịsa
8.Compressed ikuku: n'ime ịfụ, n'èzí ịfụ
9.Compressed air: n'ime ịfụ, n'èzí ịfụ
Njikere & Ihicha
Karama ndị a na -asacha na -abanye na igwe sterilizing & ihicha wee jiri nwayọ na -ejikọ site na eriri mesh. Agafere preheating mpaghara, elu okpomọkụ sterilizing mpaghara, jụrụ mpaghara nwayọọ nwayọọ.
Onye na-eme ka mmiri na-agwụ ike na-ewepu ikuku karama ahụ na mpụga, na mpaghara oke okpomọkụ, karama ahụ na-ete ihe dị ka nkeji ise n'okpuru 300-320 ℃. Mpaghara jụrụ oyi na -eme ka vial ndị a mịrị amị kpọnwụọ, wee ruo na teknụzụ chọrọ.
A na -arụ usoro ihicha na sterilaị n'okpuru nleba anya ozugbo.
Na -ejuputa & Akara
Igwe a na-anabata usoro nnyefe nke nzọụkwụ site na usoro na mbara ihu.
Igwe na -emecha usoro mmepụta niile na -akpaghị aka:
Auger na-ebuga --- Nchaji ihu nitrogen (nhọrọ) --- Njuputa ngwọta --- Nchaji nchaji nitrogen (nhọrọ) --- Preheating --- Sealing --- Counting --- mmepụta ngwaahịa emechara.
Uru Nweta Mmepụta Ampoule
1. Kọmpat ahịrị na -achọpụta njikọ otu, ọrụ na -aga n'ihu site na ịsacha, sterilizing ， ndochi na akara. Usoro mmepụta dum na -achọpụta ọrụ nhicha; na -echebe ngwaahịa site na mmetọ, na -ezute ọkọlọtọ mmepụta GMP.
2. Ahịrị a na -anabata mmiri na ikuku ikuku ikuku ikuku na -asachapụ na ịsa ultrasonic na steeti inverted. Mmetụta nhicha dị ezigbo mma.
3. A na -etinye teknụzụ nzacha nke ukwuu na nzacha igwe ịsa ahụ. A na -enweta mmiri ịsa ahụ dị ọcha na nke na -adịghị ọcha na ikuku mkpakọ site na nzacha ọnụ, nke nwere ike melite idoanya nke karama a na -asacha.
4. Kalama na auger feed na kpakpando wheel na -ezukọ, oghere auger dị obere. Ampoule nwere ike ịga ije kwụ ọtọ. Ampoule nwere ike ibufefe kwụsiri ike yana enweghị ike ịgbaji.
5. Ndị na -emegharị igwe anaghị agba nchara bụ otu akụkụ. Ọnọdụ ahụ bụ izi ezi karịa. Ndị aghụghọ na -eyi ihe akaebe. Mgbe ị na -agbanwe olu, ọ dịghị mkpa ka ndị na -eme ihe gbatịa ma tụgharịa. Mgbanwe ntụgharị anaghị emetọ mmiri nhicha.
6. A na -ete ampoule ahụ mmanụ site na ikuku ọkụ laminar flow sterilization ụkpụrụ. Nkesa okpomoku bụdịdị. Ampoule nọ n'okpuru HDC sterilization ọnọdụ dị elu, nke na -emezu ụkpụrụ GMP.
7. Akụrụngwa a na -anabata ụkpụrụ akara nrụgide na -adịghị mma iji mechie nzacha arụmọrụ dị elu nke a na -eji mee ka ọwara dị ọcha. Ihe nzacha ahụ dị mfe ịwụnye nke nwere ike hụ na ọ dị otu narị ọnọdụ ịdị ọcha.
8. Akụrụngwa na -anabata ụdị oche oche oche na ikuku ikuku ikuku kwụ ọtọ. Mmezi nke akụrụngwa dị mfe ma na -agwụ ike.
9. Akụrụngwa a na -anabata eriri na -ebu eriri nwere akụkụ. Belt na-ebugharị agaghị apụ n'ụzọ, mgbochi na-efe efe, ọ nweghị karama na-ada.
10. Akụrụngwa na-anabata teknụzụ ọgbara ọhụrụ dị ka njuju mufti, nchaji nitrogen n'ihu na azụ na akara ịse ihe waya, nke nwere ike iru ọkọlọtọ ụdị ngwaahịa dị iche iche.
11. Igwe eji emejupụta akwụkwọ na-anabata usoro mbara ihu. Igwe kpakpando a na -enye nri ma na -ebuga karama na -aga n'ihu, ngwa nke ngwa ahụ kwụ chịm na obere mmebi karama.
12. Ngwa a bụ ihe zuru ụwa ọnụ. Enweghị ike iji ya mee ihe na ampoule 1-20ml. Ịgbanwe akụkụ dị mma. Ka ọ dị ugbu a, enwere ike iji akụrụngwa ahụ dị ka ịsa vial, ijuputa na ịdepụta ahịrị kọmpụta site na -agbanwe ụfọdụ ebu na wiil nri.
Nkọwa dị mkpa 1-20ml B ụdị ampoules nke dabara na ọkọlọtọ GB2637.
Oke ikike 7,000-10,000pcs/h
Nri WFI 0.2-0.3Mpa 1.0 m3/h
Igwe ikuku ikuku abịakọrọ 0.4Mpa 50 m3/h
Ike eletrik CLQ114Vetịkal ultrasonic igwe ịsa ahụ: 15.7KW
RSM620/60 igwe sterilizing na ihicha 46KW, ike kpo oku: 38KW
AGF12 igwe ndochi na akara akara 2.6KW
Akụkụ CLQ114Vertical ultrasonic machine wash: 2500 × 2500 × 1300mm
RSM620/60 Sterilizing na ihicha igwe: 4280 × 1650 × 2400mm
AGF12 Ampoule ndochi na igwe akara: 3700 × 1700 × 1380 mm
Ibu CLQ114Vetịkal ultrasonic igwe ịsa ahụ: 2600 n'arọ
RSM620/60 Sterilizing na ihicha igwe: 4200 n'arọ
AGF12 igwe ndochi na akara akara: 2600 Kg
Nke gara aga: Vial Liquid na -ejuputa Line Production
Osote: PP Bottle IV Ngwọta Mmepụta Nweta
Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe Ampoule À Coudre Led, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Igwe eji emejuola agịga,